Naaton’ny Fitondrana Miramila Thailandey noho ny ‘ Fitsikerana Tsy Am-piheverana’ sy ny ‘Votoaty Mitongilana’ ny Voice TV · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Marsa 2017 6:05 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, русский, Español, 日本語, English
Naato mandritra ny fito andro ny Voice TV ao Thailandy. Sary tao amin'ny pejy Facebook-n'ny Voice TV
Namoaka didy fampiatoana fito andro ho an'ny Voice TV ny Vaomiera Nasionalin'ny Fifandraisandavitra sy ny Fampielezam-Baovao (NBTC), noho ny filazana fa nanitsakitsaka ny fitsipika napetraky ny Vaomieram-Pirenena Misahana ny Fandriampahalemana sy ny Lamina (NCPO) tohanan'ny miaramila ity fahitalavitra ity.
Nandrombaka ny fahefana ny tafika tamin'ny taona 2014 ary mbola mitohy ny fifehezany ny fitantanan-draharaha amin'ny alalan'ireo manampahefana izay notendreny tao amin'ny NCPO.
An'ny fianakavian'ny Praiminisitra teo aloha Thaksin Shinawatra ny Voice TV. Mihevitra ny olona sasany fa natao mba hampitahorana ilay mpitondra voaongana ny fampiatoana ilay tambajotran'ny fahitalavitra.
Ny tafika no nangataka ny fampiatoana ny Voice TV tamin'ny filazàna fa namokatra tatitra tsy marina ny Tambajotra TV tamin'ny 15 Martsa ka hatramin'ny 20 Martsa izay mikasika ny andraikitry ny fanjakana tamin'ny famonoana ankitsirano ilay mpikatroka Lahu iray, ny fanararaotam-pahefana ataon'ny miaramila sasany, ary ny fandraisana anjaran'ny polisy tao amin'ny toeram-pilokana ao amin'ny faritra iray ifandiran'ny Thailandey sy ny Kambodjiana.:
Kanefa tsy nanaiky ny fanapahan-kevitra i Prateep Kongsib, talen'ny votoaty sy vaovao ao amin'ny fahitalavitra:
Noho ny filazan'ny NBTC fa nanao fandikan-dalàna imbetsaka izay nahakasika ny filaminam-pirenena izahay no antony nahatonga anay naato, ary namoaka tatitry ny fironana iray izay angatahinay iavahana. Ny antony dia satria mino izahay fa tsy mandrahona ny filaminam-pirenena ny fanehoan-kevitra raha mbola misy koa izany.
Sary famantara ny Voice TV
Namoaka fanambarana ihany koa ny Voice TV ary nanamafy fa manaraka ny etikan'ny fampitam-baovao ny tatitra izay nataony ary miara-miasa amin'ny manampahefana ny fahitalavitra ho setrin'ny fitarainana tamin'ny fandaharana sasany :
Manamafy ny Voice TV fa hentitra amin'ny fanaovana tatitra miaraka amin'ny etikan'ny fampitam-baovao izahay. Manamafy izahay fa tsy mandrahona ny filaminam-pirenena ny votoaty na dia mety hanome fomba fijery hafa aza ny Voice TV.
Nanazava ny toerana misy anay ny Voice TV ary mbola miara-miasa hatrany amin'ny sobakomity ny mpanatontosa fandaharana NBTC. Efa niresaka tsy tapaka tamin'ny komity mpanara-maso ny fampitam-baovao sy ny mpandray anjara rehetra ihany koa izahay hanitsy ireo fandaharana araka ny fangatahan'izy ireo.
Tsy vao voalohany izao no nampiato tambajotra fampitam-baovao ny NBTC noho ny “fanimbana” ny filaminam-pirenena. Koa satria nahazo ny fahefana izy tamin'ny taona 2014, dia nanome baiko ny NBTC ny NCPO mba hanara-maso amin'ny fomba hentitra sy handrindra ny tambajotra fampitam-baovao mandrahona ny firindrana ara-tsosialy sy ny “fahasambaran'” ny vahoaka Thailandey.
Nokianin'ny vondrona fampitam-baovao isan-karazany ny didy fampiatoana. Niara-nanao sonia fanambarana iombonana izay milaza ilay didim-pitsarana ho fanitsakitsahana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ny Fikambanan'ny Mpanao Gazety Thailandey sy ny Fikambanan'ny Mpanao Gazetin'ny Haino Aman-jery Thailandey.
Nanamarika ny Fiombonan'ny Gazety Azia Atsimo Atsinanana fa tafahoatra ny fanapahan-kevitra hampiato ny tambajotra TV iray manontolo :
Tafahoatra loatra ny valinteny fampiatoan'ny NBTC ny VOICE TV, ny fanakatonana tsy ara-drariny ny fahitalavitra iray manontolo sy ny fandaharany rehetra, amin'ny fandefasana votoaty izay mifanaraka tsara amin'ny zon'ny fahitalavitra.
Nanontany tena ny antony mahatonga ny NBTC hifantoka amin'ny tambajotra TV izay fananan'ny Praiminisitry ny firenena teo aloha ireo mpisera Twitter sasany:
Lasibatra (ary voasazin’) ny manampahefana sy ny mpandrindra imbetsaka noho ny fanehoan-kevitra ara-politika ny fantsona TV an'ny zanakalahin'i Thaksin.
Mampihomehy, nahoana ny seha-baovao tokana amin'ny #ThaiFampitambaovao rehetra no voasazy hatrany noho ny fandaharana “tsy ara-dalàna” , na noho ny zavatra hafa.
Nilaza ny NCPO fa mikasa ny hamerina amin'ny laoniny ny ara-dalàna ao amin'ny firenena izy amin'ny alalan'ny fampihavanana ara-politika sy ny famelana ny fahefana sivily, saingy mbola tsy mazava ny fomba hanatanterahan'izy ireo izany tanjona izany raha mbola manohy ny famerana ny asan'ny sehatry ny fampitam-baovao izy ireo .